Sina Ny fitsipika mifehy ny ozinina fampakarana herinaratra sy mpamatsy | TieLiu
Ny booster booster dia mampiasa ny fitsipiky ny fitsentsenana rivotra rehefa miasa ny motera, izay mamorona ny banga amin'ny lafiny voalohany amin'ny booster. Ho setrin'ny fahasamihafana amin'ny tsindry amin'ny tsindry mahazatra ataon'ny rivotra any an-dafy, ny fahasamihafana amin'ny tsindry dia ampiasaina hanamafisana ny fanosehana braking.
Raha misy aza ny fahasamihafana tsindry kely eo amin'ny andaniny roa amin'ny diaphragm, noho ny faritra lehibe amin'ny diaphragm, dia mbola azo atao ny manosika lehibe hanosika ny diaphragm hatramin'ny farany amin'ny tsindry ambany. Rehefa manamboatra freins, ny rafitra booster vacuum dia mifehy ihany koa ny banga miditra amin'ny booster mba hihetsika ny diaphragm, ary mampiasa ny tsorakazo amin'ny diaphragm mba hanampiana ny olombelona hanitsaka sy hanosika ny pedal frezy amin'ny alàlan'ny fitaovam-pitaterana mitambatra.
Ao amin'ny fanjakana tsy miasa, ny lohataona miverina amin'ny tsindry valin'ny fanaraha-maso dia manosika ny tsindry valizy fanaraha-maso mankany amin'ny toeran'ny hidin-kazo eo amin'ny ilany ankavanana, ary ny seranan-tsolika banga dia eo amin'ny fanjakana misokatra. Ny lohataona valizy fanaraha-maso dia mahatonga ny kaopy valizy fanaraha-maso sy ny seza valva-drivotra hifandray akaiky, ka manidy ny seranan-tsolika.
Amin'izao fotoana izao, ny efitranon-tsolika bitrana sy ny entona fandefasana entona mampisondrotra dia ampifandraisina amin'ilay fantsom-pamokarana entona fandefasana vatan'ny vatan'ny piston amin'ny alàlan'ny lavarangana valizy fanaraha-maso, ary atokana amin'ny atmosfera ivelany. Aorian'ny fanombohana ny motera, ny banga (tsindry ratsy an'ny motera) amin'ny fisondrotan'ny motera dia hiakatra -0,0667mpa (izany hoe, ny vidin'ny tsindry amin'ny rivotra dia 0,0333mpa, ary ny fahasamihafana eo amin'ny tsindry amin'ny tsindry atmosfera dia 0.0667mpa ). Taorian'izay dia nitombo hatramin'ny -0.0667mpa ny habaka booster sy ny banga amin'ny efitrano fampiharana, ary vonona hiasa amin'ny fotoana rehetra izy ireo.
Rehefa mitresaka dia ketraka ny pedal frezy, ary ny herin'ny pedal dia manamafy ny lever ary mihetsika amin'ny tsorakazo an'ny valizy fanaraha-maso. Voalohany, ny lohataona fiverenan'ny valizy fanaraha-maso valizy dia voahidy, ary ny tsorakazo fanodinana valizy sy ny valin'ny valindrihana rivotra mandroso. Rehefa mandroso mankany amin'ny toerana misy ny valizy fanaraha-maso mifandraika amin'ny seza valizy tsy misy valaka ny tsorakazo fanaraha-maso dia mikatona ny seranan-tsolika. Amin'izao fotoana izao dia misaraka ny habaka booster sy ny efitrano fampiharana.
Amin'izao fotoana izao, ny faran'ny tsanganana valin'ny rivotra dia mifandray fotsiny amin'ny tampon'ny kapila misy ny fanehoan-kevitra. Rehefa mandroso hatrany ny tsorakazo fanodinana valizy, hisokatra ny seranan-tsolika. Aorian'ny filtration ny rivotra, ny rivotra ivelany dia miditra ao amin'ny efitrano fampiharana an'ny booster amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo misokatra ary ny fantsona mankany amin'ny efitranon'ny rindrambaiko, ary vokarina ny herin'ny servo. Satria ny fitaovan'ny takelaka fanehoan-kevitra dia manana ny fitakiana fananana ara-batana mitovy amin'ny tsindry mitovy amin'ny haben'ny soritr'aretina, ny herin'ny servo dia mitombo amin'ny refy voafaritra (tahan'ny servo force) miaraka amin'ny fitomboan'ny herin'ny fidiran'ny tsoraka fanodinana valizy. Noho ny fetran'ny loharanon-kery servo, rehefa tonga ny hery servo ambony indrindra, izany hoe, rehefa aotra ny haavon'ny banga ao amin'ny efitrano fampiharana, dia ho lasa tsy miova intsony ny herin'ny servo ary tsy hiova intsony. Amin'izao fotoana izao, ny hery fampidirana sy ny hery fivoahan'ny booster dia hitombo amin'ny vola mitovy aminy; Rehefa nofoanana ny frein, dia mihemotra mihemotra ny tsorakazo fanaraha-maso ary mihena ny herin'ny fidirana. Rehefa tratra ny teboka fisondrotana ambony indrindra, aorian'ny fisokafan'ny seranan-tsambo vaksiny, mifandray ny habaka fanamafisam-peo sy ny efitrano fandraisam-bahiny, hihena ny haavon'ny habakabaka ao amin'ny efitrano fampiharana, hihena ny herin'ny servo ary hihetsika mihemotra ny vatan'ny piston . Amin'izany fomba izany, rehefa mihena tsikelikely ny herin'ny fidirana, ny herin'ny servo dia hihena amin'ny tahan'ny raikitra (tahan'ny servo force) mandra-pivoakany tanteraka ny frezy.
Vaky frein, Fanamafisam-peo avy any aoriana, Fanamafisana ny freins, Vacuum fanamafisana, Booster Asyria, novakiny, Novakiny Servo,